Muran Midab Salka Ku Haya Oo Ka Dhacay Xeeb Ku Taalla Magaalada Cape Town – somalilandtoday.com
Muran Midab Salka Ku Haya Oo Ka Dhacay Xeeb Ku Taalla Magaalada Cape Town
(SLT-Cape Town)-Dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay mid ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan ee magaalada Cape Town kaddib markii ilaalada shirkad gaar loo leeyahay oo ammaanka ka shaqeysa lagu eedeeyay inay dadka madowga ah amreen inay goobta isaga tagaan.
Maayirka magaalada Cape Town Dan Plato ayaa sheegay in shirkadda ammaanka ka shaqeysa “aanay awood u lahayn inay dadka ku amarto inay isaga tagaan xeebta Clifton”.
“Ma aynu u ogolaan doonno shirkadaha gaarka loo leeyahay inay xaddidaan galaangalnka goobaha ay dadku isugu yimaadaan,” waxa uu sidaasi ku sheegay bayaan uu soo saaray.
Kuxigeenka wasiirka booliska Bongani Mkongi ayaa waxa uu wacad ku maray “inay tallaabo adag ka qaadi doonaan shirkaddaas ammaanka ka shaqeysa”.
“Xeebtu waa hantida qaranka, waa hantida dadka sidaas daraadeedna uma baahnin in halkaas ay joogaa shirkado ammaanka ka shaqeeya,” ayuu yiri.
Maayir Plato ayaa sheegay in ilaaladu “ay dadka oo dhan ka dalbadeen inay meesha isaga tagaan” oo si gaar ah uma aanay bartilmaameedsan dadka madowga ah.
“Shirkadahan gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya ammaanka… ayaa dhab ahaantii loo sheegay in aanay xeebta u ogolaan dadka madowga ah ee u muuqda inay darafka magaalada ka yimaadeen,” Chumani Maxwele oo ah qof aaggaas deggan oo xuquuqda u ololeeya ayaa sidaasi u sheegay barta internetka ee News 24.
“Qalalaase ayaa goobta ka dhacay booliskuna shaqo wanaagsan oo uu ku xakamaynayo xaaladda ayuu qabtay,” ayuu yiri.